Ny Herinandro Tao Koety · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Septambra 2017 2:17 GMT
Manoratsoratra ve ianao ? Ka izao, i Nibaq ao amin'ny Savior Machine (Milina Mpanavotra), tsy hoe manoratsoratra fotsiny, fa mamela ny milina fanoratsoratany any an-trano fandroana ka dia manoratsoratra eo daholo ny tsirairay ao an-tokantrano. Ito ny vokatra farany tamin'ilay fiaraha-manoratsoratry ny mpiara-monina.
Intlxpatr iray amin'ireo bilaogera marobe mpila ravinahitra ao Koety, mizara amintsika ny fomba fijeriny ny diany nankany Doha, izay feheziny anaty fehezanteny roa:
Korontana ambony ambany ny fialàna tany Koety
Nilamina tsara ny fahatongavana tao Doha.
Ankizin'ny Kolontsaina fahatelo ve ianao ? Iray amin'izany i Amer Over ao Hilaliya ary hazavainy ny atao hoe ankizin'ny kolontsaina fahatelo ary toy ity manaraka ity ny tantarany :
Olompirenen'ny tany manontolo ireo ankizin'ny kolontsana fahatelo, manana fahaizamamorona, mahaleotena, mety amin'ny daholo izay any itoerany, mahay fiteny maro, mahay mandefitra, manana Q.I ambony be noho ny sarambaben’ ny olona, afaka miaina na aiza na aiza izahay saingy tsy voafatotra velively ho anà toerana iray, na aiza na aiza.
Mijery ny fiadiana izay ho Tompondaka faha-18 ao Golfa i Aggy ( fifaninànana lalao baolina kitra atao isaky ny roa taona, misokatra ho an'ireo tarika avy amin'ny manodidina ny Golfa) ary manolotra ho antsika izay heveriny ho zavabitan'ny tarika Koetiàna tany sy ny antony tsy nahatafita azy ireo .
Kanefa, rehefa nanaraka ireo lalaon'ny AGCC Cup andiany faha-18 aho, dia rkoriko tamin'ny vokatra azon'i Koety. Tena nankaloiloy ahy ny vokatra azon'i Koety. TSY dia nahagaga ahy loatra.
Mandritra izany fotoana izany, tsy mamelively i Kthekuwaiti ao anatin'ny famelabelarany momba ireo fomba fanaon'ireo orinasa misahana fifandraisan-davitra amin'ny resaka karatra fidirana aterineto.
Dia eto indray isika.
Nalain'i Wataniya ny karatra sim ahafahany mandefa angon-drakitra, natsofony tanaty ‘router’ iray (router 3G HSDPA safidy atolotry ny GlobeSurfer ), nantsoiny hoe ‘Wnet vaovao’ ary dia narosony ho toy ny tolotra vaovao. Avy eo zareo nanomboka nitaky 12kd amboniny isambolana.
Raha hiresaka fomba fandraharahàna ara-barotra sy shenanigans, iza no tsy nanao karazana hafetsifetsena tany amin'ny lisea? Zarain'i Tat ny iray amin'ireo tantaranà hafetsifetsena nataony tany amin'ny lisea.
Manazava ny tale fa nisy namono ny trondro tao anaty tavoara ary dia izahay rehetra no hisaziana mandritry ny taona raha tsy hitany hoe iza no nanao an'io.
Efa nosaininareo ve fa misy fitsaratsarana an-tendrony atao amin'ny olona avy amina satam-panambadiana (marital status) sasantsasany ?
H over avy ao amin'ny “Readmyblog” mahatsapa fa misy izany ary namoronany fomba fiteny vaovao.
Namorona teny iray aho. Ny “maritalism”.
Entin'i No3ik isika hanao fitetezana an-tsary ny natao tao amin'ny Hussainia ( trano malalaka fanaovana fombafombam-pivavahana ho an'ny Shiita ), fitetezana an-tsary izay mety ho azo ampilaharina aminà torohay momba ny hainahandro ihany koa.
Ity no “husaineya” an'ny fianakaviana, araka izany dia ny vehivavy sy ny ankizivavy irery ihany, izany no antony mahatonga ny asa sasany ho toy ny fahombiazana lehibe.